February 14, 2019 – Myanmar Peace Monitor
Three jailed youth leaders who ledacampaign to free internally displaced people from Kachin State’s conflict zone last year have been selected to receive the Kachin Human Rights Award. Steven, who isamember of awarding committee, said that
Staff February 14, 2019 News No Comments Read more
ကရင်နီလူငယ်များ၏ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကြေးရုပ်တု ဖယ်ရှားရွှေ့ပေးရေး တောင်းဆိုမှုအပေါ် ထောက်ခံပြီး တိုင်းရင်းသား များ၏သမိုင်းနှင့် လူငယ်များ၏ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကို အစိုးရအနေဖြင့် လေးစားအသိအမှတ်ပြုရန် ကရင်အမျိုး သမီးအစည်းအရုံး-KWOက ယမန်နေ့ (ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်) သဘောထားထုတ်ပြန် တောင်းဆိုလိုက်သည်။ လက်ရှိ အာဏာရ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်-NLD အစိုးရနှင့် ပြည်ထဲရေးလက်အောက်ခံ ရဲများအနေဖြင့် ဌာနေတိုင်း ရင်းသားများအကြားရှိနေသည့် မတူကွဲပြားမှုများနှင့် အတူတကွရှိနေပြီးသား အရာများကို အပြန်အလှန် လေးစားအသိ အမှတ်ပြုမှသာ စစ်မှန်သော ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း KWOက ဆိုသည်။ KWO အတွင်းရေးမှူး
Burma police fired rubber bullets, tear gas and water cannon at peaceful Karenni protesters opposed toastatue of General Aung San that had been unveiled earlier this month in Loikaw the capital of Kayah State. Organizers of the protest